सालो र भिनाजुको संवन्ध - Ek Jamarko
Home / कथा / सालो र भिनाजुको संवन्ध
सालो र भिनाजुको संवन्ध
सालो भन्ने नाता बहुत प्यारो हुन्छ । किनभने संसारका सबै साला, भिनाजु भनेपछि मरिहत्ते गर्छन । नयाँ नयाँ ससुराली गयो लाज र धकले उस्तो खुल्न सकिदैन । बुढी पनि आमा,भाउजू , साथी-सहेली तिरै ब्यस्त हुन्छे । माइत पुगेपछि उसको फर्याकफुरुक नै अर्कै हुन्छ । हिजोसम्म संगै सुतेकी श्रीमती माईत पुगेपछि अर्कै हुन्छे ।अझ उसका साथी आउँदा त ढंग मिलाएर भलाद्मी भैदिन पर्च।उसका साथी हरुले सोधेको कुराको अदवका साथ जवाफ दिनु र फुर्क्याउनु मात्र पर्छ ।लाज एकातिर अदव एकातिर बुडी र बुडीका सैं एकातीर - बुडीको कुरो त्यही भैगो।
जेठानसंग के बोल्नु । कुन बिषयमा बोल्नु ।आफु भन्दा हेन्सम जेठान देउदा त्यसै ङिच भैराहुन्च ! ससुरा बुढा घरीघरी यसो बोल्न खोज्चन । उनले सोध्ने भनेको उहीँ गोत्र कुन हो मावल के थरी हुन ।कहाँ को थुम्कामा कुल देवीको थान छ आमाको मावल कहाँ बाको मावल कहाँ दिदीको ब्या भको कहाँ हो ? मामाको मावली को हुन ? आदि इत्यादि मात्रै हो । सासुआमालाई आज कसरी मिठो पकाएर ज्वाँई लाई खुवाउने भन्ने मै फुर्सद हुँदैन ।
बाँकी रह्यो त्यही कलिलो सालो बरा त्यही लुट्पुटिन आईपुग्छ । भिनाजु भन्छ । फुर्किन्छ । खेतवारि देखाउछ ।छिमेकी चिनाउछ ! पल्ला घरकि कान्छी संग भेटाईदिन्छ ! नम्बर पनि दिन्छ ताल परे कान्छी लाइ ! मेरा भिनाजु यस्ता र उस्ता भनेर आफ्ना साथि हरु को अगाडी फांईफुट्टी लगाउछ र भिनाजु लाइ ठुलो मान्छे बनाउछ ! भन्दा गफ गरेजस्तो हुन्छ । यो सालो भन्ने चिज कति प्यारो हुन्छ भने, हनिमुन मनाउन जाँदा धेरै भिनाजुहरुले कलिलो सालो साथै लिएर गएका छन र बीच मा सालो सुताएर निख्लो मुनिहान बिनाको हनिमुन मनाएर फर्केका छन् ।
जब सालो हुर्किदै जान्छ, सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुँदै जान्छ । सालो अरब जानू परो भिनाजुले खर्च हाल्दिन्छन । फेरि सम्बन्ध कस्तो दोहोरो हुन्छ भने, सालो अरब पुगेपछि भिनाजुलाई कहिले पनि ल्यापटप मोबाईल र घडीको अभाब हुँदैन । आउँदा पिउने दारु देखि ओड्ने कोरीयन कम्बल सम्म सालोले ल्याएकै हुन्छ । भान्जा भान्जीका लुगाफाटा देखी दिदीको मेकअपको सामान सम्म कोसेली बापत आउँछ । ताल परे स्वास्नी संग उठेको रिस त्यहि सालो माथि खान्याउन पनि पाईन्छ ! यी हेर तेरी दिदि को सोमत भनेर स्वास्नीको गल्ति देखाउने त्यहि सालो लाइ त हो, सासु लाइ देखाम भने फिर्ता गर मेरी छोरि भानि हाल्छिन, जेठान संग भन्न लाइ हैसियत पुग्दैन ! त्यहि सालो त छ एउटा – "ओई बान्द्रे" भनेर बोलाउछु – हजुर भिनाजु भन्दै खुरुरु दौडेर आइपुछ – घरि घरि त सोच्छु –केटो ले मलाइ माग्ने बुढो नै देख्दो हो ...!! समग्रमा भन्दा सालो- भेनाको सम्बन्ध जुन छ, त्यो बहुतै प्यारो छ । भावनात्मक छ ।
भिनाजु ले अन्त चक्कर चलाएको अथवा पुरानी सैं संग टुच्च भेटेर कफी खाएको अथवा चुट्ट खाएको सम्म थाह पाएपनि कुरा लुकाईदिन्छ । त्यती जेठानले थाह पाउथे भने उहिल्यै झापड हानीसक्थे । मैले एकपटक तरुनि सैं संग पार्कमा छिरेको टिकेस कमेजको खोल्टीमा राखेर बिर्सेछु - बुढीले लुगा धुने बेलामा फेला पारी । मारी थर्काई ...। को को गएको त्यो पार्क मा भनेर हनुमान ढोका कि पुलिस्नी ले भन्दा कडा रुपमा सोध पुछ सुरु गरि ! मेरा हातगोडा लगलगी काँपे ओठ मुख सुकेर प्याक प्याक भयो । सालो ले मेरो मुखमा पुलुक्क हेर्यो ! मेरो निरिह अवस्था देखेर केटाको मन कुटुक्क खायो होला र त मैले जवाफ दिन नपाउदै दिदी लाई भन्यो -भिनाजु र म गाथेंम के हिज्दिम्सो ...कति कराकी ? हाय राम मेरो परान बचो ..! बरु हिज्दिउसो केटो त्यतै घुम्दै रैच क्याओ ? देखेर पनि लुकेछ बोलेनछ क्याओ... । तर पनि कति टाठो मेरो लुते सालो... । झडम्मै पर्नलाको अफ्ट्यारो बाट फडम्मै बचायो । त्यस्तो सालो भन्दा पिरीए कोही हुन्च त ?
बरु अचेल पारक को टिकेस काण्ड पछी हल्का पकेट खर्च बढेको छ बान्द्रेको । म पनि खुरुक्कै दिन्चु । भर अभराँ काम लाउनी त्यै केटो हो... । सासु ससुराको शेषपछी पनि ससुरालीयाँ आईजाई त्यसैको मुख हेरेर अर्नी हो । क्यार्न नदिन पर्योछ र । भन्नी सोच्छु केटाको पकेट खर्चो टार्चु र सपोट किन्चु एक हीसापले हल्का महंगै परेपनि सालाको सपोट अत्यन्तै भरोसेमन्द छ मेरालागी ! जिन्नाकी मा यस्तो सालो सबैको नसिप मा काँ लेख्या हुन्छ र बरई !!
-जय सालो !!
सालो र भिनाजुको संवन्ध Reviewed by Jamarko TV on मई 01, 2013 Rating: 5